ISAYINSI ENGAPHANTSI KWAYO: YINTONI NAYE ISAYENZISWE NINI
Ngaphantsi komqondiso: Iyintoni kwaye kufuneka isetyenziswe nini?
Kuba sikwisikolo samabanga aphantsi, siqala ukuba nobudlelwane nomxholo we uphawu lobuncinci, kwaye kumaxesha amaninzi, ukudideka kudla ngokubakho nomnye umqondiso ofanayo obonisa okwahlukileyo. Kule nqaku, sikunika izixhobo ukuze wazi indlela yokwahlulahlula kwaye uyisebenzise ekusebenzeni kwezibalo.
1 Ngaphantsi komqondiso
1.1 Uthini umqondiso ongaphantsi kunentsingiselo kwimathematics?
2 Ithetha ntoni ikhompyutha?
2.1 Kulwimi lwenkqubo
2.2 Uphawu oluphindwe kabini ngaphantsi
2.3 Olunye usetyenziso
3 Ulwazi olongezelelekileyo
El uphawu lobuncinci, isetyenziswa kwimisebenzi yemathematika ukubonisa umahluko kumaxabiso amanani, iifomyula okanye iinkqubo ezithile zihlala zisekwe kubudlelwane babo ngokubhekisele kwelinye ixabiso, kubalulekile ukuba ungabhidanisi nophawu inkulu kune; Ukuze ufunde ngakumbi ngesi sihloko sikulethela lonke ulwazi oluyimfuneko.
Olu phawu lwemathematika esilwaziyo sonke kubantwana, luchazwa ukuseka ukungalingani phakathi kwamaxabiso amabini. Ngokuchasene noko, uphawu olukhulu kune (>) luyasetyenziswa, oluchaza ixabiso elingaphezulu kwelinye; Isimboli iqulathe imivumbo emibini emincinci, ikwicala elingaphezulu lasekunene kunye nesezantsi ekhohlo (<).
Imbali yalo mfuziselo isusela emva kwinkulungwane ye-XNUMX, xa kwafunyanwa ezinye iitekisi apho amanye amanani abonisa amanani amabini abonakaliswa ngokwemathematika. Nangona kunjalo kule mihla kwaye nakweyiphi na inkqubo yemathematics luphawu oluncinci olubekwe phakathi kwamanani amabini okanye iifomula apho ixabiso lokuqala lithelekiswa khona, libonisa ukuba limele ihlelo elingaphantsi kwelo liboniswe kwicala lasekunene.
Iimpawu uphawu olukhulu nolungaphantsi, zisetyenziselwa ukwahlula omabini amanani okanye amaxabiso. Isetyenziswa kwi-physics, chemistry, nakulwimi lwekhompyuter, kunye nakwiindawo zophando okanye ukuthelekisa amaxabiso; Ngayiphi na imeko, kumisela ukwehla kwenqanaba okanye icandelo kwifomula.
Olu hlobo lwesimboli luyasetyenziswa nanamhlanje kwiilwimi ezithile zekhompyuter ukumisela amanyathelo athile, ukusikelwa umda kunye nenkqubo yobudlelwane kwiifomathi ezahlukeneyo ezinxulumene nenkqubo kunye noyilo lweekhompyuter kunye nesoftware.
Uthini umqondiso ongaphantsi kunentsingiselo kwimathematics?
Olu phawu ludityaniswe nezinye iisimboli ezinje nge (≤), ukubonisa ukuba ixabiso lilingana okanye lincinci, oko kukuthi, linciphisa isenzo senani kwicala lasekhohlo, apho linikezelwa khona ukuba lingaya phi. Kubaluleke kakhulu kumaxabiso asemzimbeni kunye neekhemikhali apho kuya kufuneka umisele ukuba ungaqikelela okanye uqikelele ixabiso elithile okanye inani elithile.
Iifomula ezisebenzisa ezi mpawu zivumela ukwenziwa kwezenzo apho abafundi baqondayo ukumisela umda kunye namaxabiso amanani athile, kuyabanceda baqonde ngendlela elula kwaye ngaphandle kwengcaciso eninzi, amaxabiso okwenyani amanani amancinci angaphantsi kwelinye ixabiso, luphawu olubalulekileyo lokwazi amaxabiso iidesimali.
Ithetha ntoni ikhompyutha?
Ngandlela zonke, ithathwa njengophawu lolwimi olumele uphawu lwe-ASCII (hex 3C, idesimali 60. Kwelinye icala, olu phawu lusetyenziselwa ukuqikelela isibiyeli se-engile yokuvula (<), kuba ngokwenkqubo ye-ASCII ayinayo izibiyeli engile.
Xa besebenza nolwimi lweBASIC, bamele usapho lakwaLisp; Kwindlela efanayo emele iilwimi zosapho lakwa-C, ezibandakanya iJava kunye neC ++; kwimathematics ithetha into enye, "ngaphantsi ko."
Kulwimi lweColdfusion, igama elincinci eliboniswe njengomsebenzisi we .it. Kwaye uphawu (<) alusetyenziswanga. Kukwenzeka into efanayo nakulwimi lwaseFortran, apho batshintsha khona isimboli. I-LT. Ukunika intsingiselo efanayo, kwiinguqulelo zangaphambili zenkqubo yolwimi ukuba uphawu (<) lusetyenzisiwe.
Kwezinye iinkqubo zokusasaza iiyantlukwano ezithile ziyaqwalaselwa. Umzekelo, kulwimi lweBourne Shell, umqhubi -lt uthetha "ngaphantsi" kwaye akasebenzisi uphawu (<).
Uphawu oluphindwe kabini ngaphantsi
Olu phawu luphindiweyo njengoBash, uPerl, kunye noRuby bayisebenzisa ukubonisa <umqhubi
Kwiilwimi ze-C kunye ne-C ++, isetyenziselwa umqhubi we << kwaye imele uhlobo lotshintsho lwebhanari ngasekhohlo. Nangona kunjalo, kwilayibrari esemgangathweni yolwimi lwe-C ++, umqhubi << ukhonjisiwe kumjelo wokuphuma kwaye wenza isenzo somqhubi ekufakweni, ekuvumela ukuba wenze imisebenzi yokuphuma ngokulandelelana.
Kukwakho nomThathu uphawu lobukhulu obungaphezu kobunye, apho inikwe intsingiselo kulwimi lwenkqubo, umsebenzi wayo kukubonisa ukuqala okanye ukuphela kwenkqubo, izibhengezo okanye iifowuni ezingafaniyo: iilwimi ezinje ngeBhash kunye nePerl bayisebenzisa xa uphawu olukhulu lubonisa ukuphela kwefayile.
Ngenxa yoko, umqondiso uyasetyenziswa njenge umqondiso omncinci qUphawu olulinganayo (<=), Ikhonza malunga nophawu olungaphantsi okanye olulinganayo ku (≤). Ulwimi lwe-ASCII alusebenzisi lo mqondiso kwaye luyitshintsha kwigama lekhowudi, kwicandelo labo iSiseko, iFortran Bourne Shell kunye neWindows PowerShell babhekisa kuyo njengesalathiso sokuchaza "ngaphantsi okanye ngokulinganayo".
Ngenxa yoko, kukwakho uphawu "ngaphantsi kwe-hyphen minus" (<-), esetyenziswa kulwimi lwenkqubo ukuba isetyenziswe njengomnikezeli wesabelo sasekhohlo. Ezinye iilwimi ezinjengeBourne Shell ziyisebenzisa ukuyihambisa kwakhona okanye njengesichazi kwigalelo lefayile.
Ngayiphi na imeko, i uphawu lwesimboli (<), ihlala ibhekisa kwisalathiso kwixabiso elisezantsi, inokuba nezinye iindlela ezinjengezo sizibonileyo kwiilwimi ezahlukeneyo zenkqubo. Ke kufanele ukuba ithathelwe ingqalelo enjalo kwaye igcinwe kwiinkqubo ngaphandle kokutshintsha eyona nto ithethwayo
Kuzo zonke izixhobo zeselfowuni sinokufumana lo mfuziselo ubekwe kwikhibhodi yedijithali, awuzange unyamalale kumaqhosha ekhompyuter. Ziyinxalenye yeesimboli ezisetyenziselwa ukuchaza eminye imifanekiso ethi kamva ibe zii-emoticon kunye namanani xa ulungiselelo lwezixhobo zeselula zahlukile.
Gcwalisa olu lwazi ngokunqakraza kwikhonkco elilandelayo apho kuchazwa imiba enxulumene nesi sihloko Amagqabantshintshi eAlgebra: yonke imicimbi
Ukuxhotyiswa Yintoni? Yenziwa njani? nokunye okuninzi
Novemba 6, 2020
Isosceles Triangle: Yintoni le? ukuhlelwa kunye nokunye
Iimpawu eziphambili zejometri kunye namagama abo
Kukhulu kunoku: Uzahlula njani olu phawu kwabanye?
Amanani angaqhelekanga kunye namanani: iimpawu kunye nokunye